Samsung သည် Siri နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့် Virtual Assistant Bixby ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် Androidsis
Samsung သည် Siri နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့် Bixby virtual assistant ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
Bixby ကို Galaxy S8 တွင်သက်ဝင်စေရန်ရည်ရွယ်သည်
သာရှိပါတယ် လာမယ့်၏ပစ်လွှတ်သည်အထိ9ရက် Galaxy S8 နှင့် S8 +မကြာမီကပေါက်ကြားမှုတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပေမယ့် Samsung ကဒီပစ္စည်းရဲ့အနာဂတ်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
Samsung ၏အမှုဆောင်ဒု - ဥက္ကhimself္ဌနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှူး InJong Rhee ကိုယ်တိုင်သူဖြစ်သည် အသစ်အတုထောက်လှမ်းရေးလက်ထောက် Bixby ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်၎င်းသည် Galaxy S8 မှစတင်ကာကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ်စမတ်ဖုန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်တူညီသောကိုယ်စားလှယ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် Galaxy S8 တွင်နောက်ထပ်ခလုတ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည် ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် Bixby ကိုသက်ဝင်စေရန်သီးသန့်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
Samsung က၎င်းကိုပြောဆိုခဲ့သည် Bixby သည်အခြား virtual assistants များနှင့်ကွဲပြားသည် Siri (သို့) Google Assistant အပါအ ၀ င်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရဤအတုထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းသည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်တောင်းခံသည့်အတိုင်းသင်ယူလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီက Bixby ကို အခြေခံ၍ တီထွင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် သုံးအရေးကြီးသောတိုင်: သမာဓိရှိခြင်း, အခြေအနေ၏အသိပညာနှင့်သိမြင်သည်းခံစိတ်။
သမာဓိရှိခြင်းသဘောတရားသည်ထိုအချက်ကိုရည်ညွှန်းသည် Bixby သည်မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုနီးပါးလုပ်နိုင်လိမ့်မည် အသုံးပြုသူမှမည်သည့် application ကိုမဆိုတောင်းခံရန်တောင်းဆိုသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကတော့ application developer များသည်လပေါင်းများစွာကြာ ဦး မည်ဖြစ်သော Bixby အတွက် support ကိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
Samsung ၏အမှုဆောင်ဒုဥက္ကand္ဌနှင့် R&D၊ Software and Services ဌာနအကြီးအကဲ InJong Rhee
ဒုတိယအချက်အရ၊ လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုနေစဉ်ပင် Bixby ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်သီအိုရီအရ၎င်းသည်သင့်အတွက်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုသိသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ပြက္ခဒိန်အပလီကေးရှင်းတွင်ရှိနေပြီး Bixby ကိုသက်ဝင်ပါကဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သင့်အားဆိုင်းငံ့ထားသောသို့မဟုတ်အခြားအလားတူအရာများပြုလုပ်မည့်အနာဂတ်ချိန်းဆိုမှုများကိုကြည့်ရှုရန်နေ့ကိုစီစဉ်ရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကသင့်ကိုကမ်းလှမ်းသင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ တတိယအယူအဆဖြစ်သောသိမြင်မှုဆိုင်ရာသည်းခံမှုဟူသောသဘောသည် Bixby ကိုသင်မပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့နေလျှင်ပင်သင်၏ command များကိုနားလည်ရန်အထိပိုမိုနားလည်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စများတွင်၎င်းသည်ပထမ ဦး စွာပြုလုပ်သင့်သည်ဟုထင်မြင်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးမကြာမီနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားတောင်းလိမ့်မည်။ ဒီလိုမျိုး, လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်သီးခြား command များကိုသင်မမှတ်မိတော့ပါ.
ဤအရာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြင့်များစွာလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည် Bixby ကိုသက်ဝင်စေရန်အတွက်သီးသန့်ခလုတ်အသံကိုဖြတ်ပြီးပြောတာထက်ခလုတ်တခုကိုဖွင့်ဖို့ပိုလွယ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။
သတင်းဆိုးကတော့လာမယ့် Galaxy S8 နဲ့ S8 + ရောက်လာရင် Bixby ကိုထောက်ပံ့သည့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများသာရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် Samsung အနေဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအက်ပလီကေးရှင်းများကိုထပ်မံထည့်သွင်းမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်စိတ် ၀ င်စားသော developer အားလုံးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိရိယာ (SDK) စတင်ရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။
Bixby သည် Galaxy S8 နှင့်စတင်မိတ်ဆက်သော်လည်း Samsung သည်၎င်း၏ virtual assistant ကိုစမတ်ဖုန်းများထက်အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ကျယ်ပြန့်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်နေသည်။
Bixby ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရန်, မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင်၎င်းသည်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းသတိရပါ ၏ Galaxy S8 နှင့် S8 + ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung သည် Siri နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့် Bixby virtual assistant ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
မိမိ၏ iPhone ကိုရေချိုးခန်း၌အားသွင်းနေစဉ်တွင်လူတစ်ယောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းထားသည်